हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको आज जन्म दिन परेको छ । कति बर्षको भए मनोज ? – Khabar Patrika Np
हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको आज जन्म दिन परेको छ । कति बर्षको भए मनोज ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ३०, २०७८ समय: १७:२८:५४
हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको आज जन्मदिन रहेको छ। यति बेला गजुरेल लाइ जन्मदिनको सुभाकनामा दिने हरुको लर्को लागेको छ। उनलाई कलाकारिता मात्र न भएर विभिन्न क्षेत्रका मनिष हरुले सुभकामना दिइ रहेका छन्। मध्यम परिवारमा जन्मिएका हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको वास्तविक नाम भने माया नाथ गजुरेल हो। पिता स्व. भवानीप्रसाद गजुरेल र माता इन्द्रमाया गजुरेलको कोखबाट वि .स २०३१ साल बैशाख २९ गते कान्छा छोरा को रुपमा उनको जन्म भएको थियो। गजुरेल माथिका उनका ४ जना दिदीहरू र २ जना दाइहरू पनि छन्। सानै उमेरको हुदा बुवा गुमाएका गजुरेलली आफना विचाराधीन अवस्था हरु निकै कस्टकर गरि बिताएका छन्। आफु ६ महिनाको हुदा नै बुवा स्वर्गीय भए पछि पारिवारिक कारणले गर्दा उनि कहिला आम संग कहिले काकासंग त कहिले आफन्तहरु संग उनि थुप्रै ठाउ बसाइसराइ गर्नु परेको थियो । यसरी मनोज गजुरेलले ताप्लेजुङ, पाँचथर, झापा हुँदै अन्तत काठमाडौँ पुगे।
गजुरेलको प्रारम्भिक शिक्षा श्री गणेश मावि मा शिशु कक्षाबाट सुरु भएको थियो । त्यस समय उनी मावली घरमा बस्दै आएका थिए । उनको विद्यालय किस्सा निकै रोचक छ । उनी सात वर्षको हुँदा उनको परिवार झापाको दमकमा बसाइँ सरेर गएपछि उनको पढाइ पनि त्यतै सर्यो । ताप्लेजुङ, पाँचथर, झापा, मोरङ र काठमाडौँ गरि उनले स्कुल जिवनमै १० वटा स्कुल परिवर्तन गरेका थिए र ११ औ स्कुलबाट एस एल सी उतिर्ण गरेका थिए ।
सानैदेखि ठट्टा गर्ने स्वभावका गजुरेलको कलाकारितामा प्रवेश पनि सानै उमेरमा नै भयो। उनले विसं २०४० सालमा झापाको शतासीधाममा दशैँको अवसरमा प्रदर्शित नाटक खेलेर कला क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनी थिए । वि सं २०४५ मा हिमालय माध्यमिक विद्यालय, दमक, झापाको अतिरिक्त कृयाकलापमा हास्यव्यङ्ग्य प्रस्तुति गरेर पुरस्कृत भएपछि उनलाइ कलाकारिता क्षेत्रप्रति आकर्षण बढेको थियो । केही स्टेज कार्यक्रमहरुमा प्रस्तुति दिए पछि भने गाउँघरका पूजाआजा तथा अन्य साँस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा उनको खोजी हुन थाल्यो।
वि सं २०४५ को अन्त्यतिर काठमाडौँ आएपछि रेडियो नेपालको बालकार्यक्रममा नियमित कविता वाचनमा भाग लिन थाले। उनी पढ्ने पद्मोदय माविको नजिकैका रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, विश्वभाषा क्याम्पसलगायत अन्य क्याम्पसमा उनी भन्दा सिनियर दाइहरूले उनको प्रस्तुतिको डिमण्ड गर्न थाले ।
बिस्तारै उनी मञ्चहरूमा जम्न थाले, विद्यार्थी संगठनहरूको कार्यक्रमहरूमा उनको माग हुन थाल्यो। क्याम्पस भन्दा बाहिरका विभिन्न कार्यक्रम हरुमा पनि उनलाइ प्रस्तुतिका लागि निम्तोआउन थाल्यो । यसरी नै बिस्तारै उनी हास्यव्यङ्ग्य कलाकारको रूपमा स्थापित हुन थाले ।
विसं २०५२ सालमा रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम कुरा गर्यो कुरैको दुःख बाट उनको लोकप्रियता झन चुलिन थाल्यो । उनले रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने गुडनाइट एफएम मा पहिलो रेडियो प्रस्तोताको अनुभव लिएका थिए। विसं २०५३ सालदेखि साङ्ग्रिला च्यानलबाट प्रसारण हुने रमाइलो साङ्ग्रिला कार्यक्रम चलाएर उनी टेलिभिजन कार्यक्रममा देखिन थाले। उक्त कार्यक्रमले उनको लोकप्रियता निक्सी बढ्न थाल्यो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल,भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका साथै अमेरिकी पुर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसम्मको हाउभाउ सहितको नक्कलक्स कारण उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत छाप छाड्न सफल भएका छन् । अमेरिकी अनलाइन सीबिएस न्युजले समेत उनलाई विश्वका १८ कमेडियनको सूचीमा राखेको छ।
यसरी विश्वलाई हसाउन सफल कलाकार गजुरेल स्वयमको भने परिवारिक अवस्था हसिलो बन्न सकेन । उनी विसं २०५२ सालमा मिना ढकालसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका थिए । तर उनको हाल सम्बन्धविच्छेद भइसकेको छ । मनोज र मिनाबाट दुई सन्तान मिरोज र मेमोरी छन । हाल उनी दोस्रो बिवाहाको तयारीमा रहेको बताइएको भए पनि उनले बिवाहा कोसग र कहिले गर्छन् भन्ने बिषयमा भने सार्वजनिक भएको छैन ।
यो भीडियो हेर्नुहोस :